Maxaad ka ogtahay goobaha taariikhiga ah ee loo dalxiis tago Somaliland? |
Labaatankii sano ee ugu dambeeyay goobo badan oo taariikhi ah ayaa laga helay Jamhuuriyadda Madaxa-bannaan ee Somaliland. Waxaa haatan jira in ka badan boqaqday ol goobood oo ay ugu caasan tahay Laas Geel oo laga helay dhagxaan ay sawirro ku xardhan yihiin oo 9000 jirsaday. Si kastaba, dhagaxaantan ma aysan aqoonsan mana ilaaliyaan ururrada daryeela goobah ataariikhiga ah sida UNESCO.
Image captionDhagaxaantan ayaa jirsadan 9000 oo sano